Messi, Aguero & Saxiixyada Ugu Fiican Ee Xorta Ah Ee La Sameeyay Suuqa Xagaagan. – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Messi, Aguero & Saxiixyada Ugu Fiican Ee Xorta Ah Ee La Sameeyay...
Messi, Aguero & Saxiixyada Ugu Fiican Ee Xorta Ah Ee La Sameeyay Suuqa Xagaagan. – Banaadirsom
Suuqa xagaaga ayaa maraya meel xasaasi ah iyada oo ay todobaadyo inaga xigaan xidhitaanka suuqa waxana jira saxiixyo badan oo ay sameeyeen kooxaha qaarada yurub kuwaas oo ay ku xoojinayaan kooxohooda xilli ciyaareedkan.
Waxa jira xiddigo badan oo bilaa koox ahaa waliba qaab xor ah ugu biiray kooxo cusub intii uu furnaa suuqa xagaagu ilaa haatan kuwaas oo qaab lacag ahaan ah ugu biiray Kooxo kale.
Hadaba warbixintan waxa aan ku soo bandhigi doonaa 6-da saxiix ee ugu fiican ee lacag la’aanta ugu biiray kooxaha reer yurub:
Xiddiga Messi ayaa ah saxiixa ugu weyn ee dhaca suuqa xagaaga, Messi ayaa Barcelona ka tagay kadib 21 sano oo uu joogay Banaadirsom Barcelona isaga oo ku biiray Banaadirsom PSG kana dhigay kooxdiisi 2-aad ee xirfadiisa ciyaareed.
Kadib 16 sano oo uu joogay Banaadirsom Real Madrid, Sergio Ramos ayaa ku biiray Banaadirsom PSG kadib markii uu dhacay heshiiskiisa Los Blancos isaga oo qaab xor ah ugu biiray Banaadirsom ka dhisan caasimada France.
Banaadirsom PSG aya la odhan karaa waxa ay xagaagan yihiin kuwo uruursanaya xiddigaha xorta ah ee bilaa Banaadirsom ah Goolhaye Donnaruma ayaana qaab xor ah ugu biiray Banaadirsom PSG kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula jiray Banaadirsom Ac Milan.
Xiddiga reer Holland ayaa ku biiray Banaadirsom Barcelona kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula jiray Banaadirsom Lyon waxana uu doortay in uu ku biiro Banaadirsom reer Spain isaga oo ugu biiray qaab xor ah xagaagan.
Kadib 5 sano oo uu wakhti fiican ku qaatay Banaadirsom Liverpool, xiddiga reer Holland ee Wijnaldum ayaa isaga tagay Banaadirsom Liverpool isaga oo qaab xor ah ugu biiray Banaadirsom PSG.
Waa xiddig kale oo Ac Milan ah oo qaab xor ah uga tagay Banaadirsom Ac Milan laakiin waxa uu xiddigan ku biiray Banaadirsom ay xafiiltamaan Ac Milan ee Inter Milan waana xiddiga reer Turkey ee Hakan Çalhanoğlu kaas oo qaab xor ah uga tagay Milan.
Xiddiga reer Argentine ee Sergio Aguero ayaa ka tagay Banaadirsom Man City kadib 10 sano oo uu joogay Banaadirsom Waxana uu qaab xor ah ugu biiray Banaadirsom Barcelona kuwaas oo ay doonayeen in ay ku xoojiyaan weerarka Banaadirsom.
Xiddiga reer Austria ayaa dhankiisa ka tagay Bayern Munich muddo sanado ah oo uu joogay waxana uu qaab xor ah ugu biiray Banaadirsom Real Madrid isaga oo doortay Banaadirsom Los Blancos kadib markii uu iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Banaadirsom.
Banaadirsom Barcelona ayaa dhankeeda xagaagan ku shaac baxday saxiixyada xorta ah waxana ay daafaca dhexe ee Eric Garcia qaab xor ah ugaal wareegeen Banaadirsom Man City kadib markii uu dhacay heshiiskiisa Banaadirsom Man City dhamaadkii xilli ciyaareedkan.
Previous articleMaxaa ka jira in ciidamo gadooday ay qabsadeem garoonka diyaaradaha ee Doolow?
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee shirka musharaxiinta ee ka socda hotel Jazeera + Sawirro